Child Health Care • Zifam Myanmar
Home » Child Health Care
Zifam Health Care
ဧပြီလမွေးနေ့ရှင် သားသား၊မီးမီးတို့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် အစီအစဉ် .
ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင် ဖေဖေ၊မေမေတို့က အခုအချိန်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါအန္တရာယ်မှ သားသား၊မီးမီးလေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့
📌 ယနေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ (၇) ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ (၇၃) နှစ်မြောက်ရှမ်းပြည်နယ်နေ့မှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနှင့်တကွ မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ
📌 ကျန်းမာထက်မြက်ရင်သွေးအတွက် ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲ
👱‍♀️ Jessica Mozart မှ Moderator အနေနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်(စနေနေ့) တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ UMFCCI ခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် ကျန်းမာထက်မြက်ရင်သွေးအတွက် ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခရဲမြင့်ကျော်မှ ရင်သွေးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာအကြောင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်(စနေနေ့) တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ UMFCCI ခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲတွင်
ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့် ရာသီမလာတာ ရာသီမမှန်တာတွေဖြစ်နိုင်လဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ပထမ ၃လ မှာပြုလုပ်ရမယ့်အချက်များ